Dɛn nti na saa nkurɔfo yi ani agye saa? Wɔwɔ yɛn nhyiam ahorow no bi ase. Sɛnea wɔka kyerɛɛ Onyankopɔn asomfo a wɔtenaa ase tete no sɛ wonhyiam mprɛnsa afe biara no, yɛn nso yɛhwɛ kwan sɛ yɛbɛkɔ nhyiam akɛse. (Deuteronomium 16:16) Afe biara yɛyɛ nhyiam ahorow abiɛsa: amansin nhyiam abien a yɛyɛ emu biara da koro, ne ɔmantam nhyiam a yɛyɛ no nnansa. Mfaso bɛn na yenya fi nhyiam ahorow yi so?
Ɛma yɛne yɛn nuanom Kristofo abusuabɔ mu yɛ den. Sɛnea Israelfo no ani gyei sɛ wobeyi Yehowa ayɛ wɔ “asafo bagua kɛse mu” anaa nhyiam akɛse ase no, saa ara na yɛn nso yɛn ani gye sɛ yɛbɛbom asom wɔ nhyiam akɛse ase. (Dwom 26:12; 111:1) Saa nhyiam ahorow yi ma yenya hokwan ne Adansefo a wofi asafo afoforo mu anaa wɔn a wofi aman foforo so mpo hyiam nya fekubɔ. Sɛ edu awia a, yɛtena faako didi wɔ nhyiam no ase, na ɛno ma yenya hokwan de nya nnamfo wɔ saa nhyiam ahorow no ase. (Asomafo Nnwuma 2:42) Ɛhɔ na yehu ɔdɔ a ɛma “anuanom nyinaa” a wɔwɔ wiase yɛ biako no.—1 Petro 2:17.
Ɛboa yɛn ma yenya nkɔso wɔ yɛn som mu. Israelfo no san nyaa Kyerɛwnsɛm no a wɔkyerɛkyerɛɛ mu ma ‘wɔtee nsɛm no ase’ no so mfaso. (Nehemia 8:8, 12) Yɛn nso yɛn ani sɔ Bible nkyerɛkyerɛ a yenya wɔ yɛn nhyiam ahorow ase no. Dwumadi no mu biara gyina Kyerɛwnsɛm no mu asɛmti bi so. Ɔkasa ahorow, ɔkasa a wɔakyekyɛm, ne nsɛm a wɔka na wɔyɛ ho ɔyɛkyerɛ ahorow a ɛka koma no ma yehu sɛnea yɛbɛyɛ Onyankopɔn apɛde wɔ yɛn asetenam. Sɛ yɛte osuahu ahorow a ɛfa wɔn a wɔregyina nsɛnnennen ano wɔ mmere a emu yɛ den yi mu sɛ Kristofo no a, ɛhyɛ yɛn den. Wɔ amantam nhyiam ase no, drama a wɔhyɛ tetefo ntade wom no ma yɛkae Bible mu nsɛm, na yenya asuade a mfaso wɔ so pii fi mu. Wɔ nhyiam biara ase no, wɔbɔ wɔn a wɔahyira wɔn ho so ama Onyankopɔn no asu.
Dɛn nti na nhyiam ahorow a yɛyɛ no yɛ anigye bere?
Sɛ wokɔ yɛn nhyiam no bi a, wobɛyɛ dɛn atumi anya so mfaso?
Sɛ wopɛ sɛ wuhu yɛn nuanom yiye a, yɛsrɛ wo sɛ kɔ yɛn nhyiam a edi hɔ no bi. Nea ɔne wo sua Bible no betumi de nhyiam no ho dwumadi nhyehyɛe ho krataa akyerɛ wo na ama woahu nsɛm a yesusuw ho no bi. Kyerɛw bere ne baabi a wɔbɛyɛ nhyiam a edi hɔ no wɔ wo kalenda so, na sɛ wubetumi a, woakɔ bi.
Video: Ɔmantam Nhyiam a Yehowa Adansefo Yɛ no Afe Afe
Hwɛ nea enti a nnipa mpempem pii kɔ saa nhyiam titiriw no bi wɔ wiase nyinaa no.